ट्रम्पको एसिया भ्रमण : उत्तर कोरियाबाट सिर्जित चुनौतीलाई सामना गर्न चीनले साथ देला ? - samayapost.com
ट्रम्पको एसिया भ्रमण : उत्तर कोरियाबाट सिर्जित चुनौतीलाई सामना गर्न चीनले साथ देला ?
समयपोष्ट २०७४ कार्तिक २२ गते ९:५१
डग्लस एच पाल
राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको एक वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एसियाली मुलुकमा पहिलो सबैभन्दा लामो अवधिको औपचारिक भ्रमणमा छन् । यस १२ दिने एसियाली क्षेत्रका पाँचवटा मुलुकको भ्रमणमा उनले संयुक्तराज्य अमेरिका र यसको नयाँ नेतृत्वप्रतिको आशंका मेट्ने अपेक्षा गरिएको छ । एसियामा अमेरिकाका चुनौती र सम्भावनाहरुको सन्दर्भमा यो कुनै नयाँ उद्देश्यमा केन्द्रित भने छैन ।
ट्रम्पको भ्रमण जापान र कोरियासँगको विगत लामो समयदेखिको सहकार्य र सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र सुदृढ गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको छ । गत वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानका क्रममा एसियाली गठबन्धनप्रति ट्रम्पको धारणा सकारात्मक नरहेको अवस्थामा यो भ्रमण हुन लागेकोले पनि धेरैको चासो बढेको हो । भ्रमणमा ट्रम्पले आफ्नो मागप्रति बढी नै दबाब सिर्जना गर्नेछन्, र बेइजिङमा रहँदा पनि यसलाई दोहोर्याउने छन् । उत्तर कोरियामाथिको राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएका प्रतिबन्धहरुको पूर्ण पालनामा सघाउन चीनमाथि उनले अवश्य दबाब दिनेछन् ।
वैदेशिक नीति बाहेक ट्रम्पको एसिया भ्रमण आर्थिक उद्देश्यमा स्वभावतः केन्द्रित हुनेछ । ठूलो अमेरिकी कर्पोरेट समूह पनि अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रोसका साथ चीन भ्रमणमा हुनेछ जसले नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने, खुला बजारलाई प्रबद्र्धन गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापारमाथिका आरोप प्रत्यारोपलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चिनीया अधिकारीहरुले समेत नयाँ सम्झौताहरुको घोषणा गर्ने तथा विदेशीका लागि हालसम्म बन्द रहेका कपितपय क्षेत्रमा चिनीया बजार खुला गर्नेतर्फ विचार गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।
अहिलेसम्म त सबै ठिकै देखिन्छ । तर यही नै पर्याप्त भने पक्कै होइन ।
यस क्षेत्रका अधिकारीहरुसँगको कुराकानीले के देखाएका छन् भने अमेरिकाका मित्रराष्ट्र र गठबन्धनहरुले अमेरिकी अधिकारीहरुबाट कुनै किसिमको पूर्व जानकारी पाएका छैनन् । विगतमा महत्वपूर्ण नयाँ नीति र कार्यक्रमका बारेमा आधार तयार पार्ने सन्दर्भमा पूर्व छलफल हुने परम्परा रहीआएको थियो । अझ महत्वपूर्ण कुरा त, भ्रमणका क्रममा जारी ब्रिफिङ र नीति वक्तव्यहरुले महत्वपूर्ण राजनीतिक र रणनीतिक प्रवृत्तिलाई खासै महत्व दिएको पाइन्न । अमेरिकाको एसिया मामिला सम्बन्धी नीति के हो भन्ने बारेमा यी वक्तव्यहरु स्पष्ट देखिन्नन् ।
ट्रम्पले युरोपेली र एसियाली गठबन्धनमाथि गर्ने गरेको गालीगलौज र निन्दालाई फिर्ता लिएझैँ उनले संरक्षणवाद र एकलकाँटे चाहनालाई पनि त्याग्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक रुपमा, ट्रम्पले एकल प्रयासभन्दा नयाँ बहुपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अगाडि बढाउन अग्रसरता लिनु पर्दछ र यसैबाट उसलाई फाइदा हुनेछ । साथै, यसबाट एसियामा व्यापारिक नेतृत्व लिने चीनको चाहना पनि नियन्त्रणमा आउने छ । र, यसका निम्ति काम गरेर देखाउने ट्रम्पमाथि सुनौलो अवसर छ । आफ्नो कार्यकालको आरम्भमै बहुचर्चित ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसीप टीपीपी सम्बन्धी व्यापार सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेलगत्तै टीपीपीमा आबद्ध अन्य ११ वटा साझेदार मुलुकलाई यस सम्झौतालाई यथावत राख्ने सहमति जनाएका थिए । आजको बदलिँदो समयमा नेतृत्व क्षमताबाट बिमुख भएर अलग्ग बस्नु कदापि ठीक होइन ।
हाल अमेरिकी चाहना नै चीनमा वित्तीय–सेवा बजारको पहुँच हो, र क्रेडिट रिसर्च सेवा आरम्भ गर्ने, र त्यसलगत्तै क्रेडिट–कार्ड मार्केटिङ गर्ने चाहना अमेरिकाको छ । यसैबीच, चीनले हानिकारक वित्तीय प्रणाली ९फिनटेक० विश्वभर फैलाएको छ, र यसबाट भुक्तानीहरु क्रेडिट कार्डको सट्टा मोबाइल फोनबाट हुने गरेको छ ।
ट्रम्पका निम्ति यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो । ट्रम्पको एसिया भ्रमणले नयाँ युगमा अमेरिकी सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न उपयुक्त मौका पनि उपलब्ध गराउनेछ । (रासस/प्रोजेक्ट सिन्डीकेट) अनुवाद : सोमनाथ लामिछाने (डग्लस एच पाल कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पीसका उपाध्यक्ष हुन । )